Orinasa mpamokatra valizy vonjy maika any China | Jiasheng
Valve ambany vonjy maika
Fitaovana sy habe:
Firaka aluminium:80/100/150 (3 ”/ 4” / 6 ”)
Inôksa:80/100 (3 ”/ 4”)
Profile 1: vonoina tapaka tapaka, napetraka eo ambanin'ny kamio kamio,. Raha misy fiatraikany mahery vaika ny tanker, dia tapaka tampoka ny valizy vonjy maika, manasaraka ny vatan'ny tanker sy ny fantsony ambany ho vatan'ny tanker tsy miankina, hisorohana ny famoahana rano ary manatsara ny fiarovana mandritra ny fitaterana, noho izany dia be mpampiasa eran'izao tontolo izao. Ity vokatra ity koa dia mifanaraka amin'ny fenitra QC / T932-2012.
Function sy toetra: ny vonjy maika dia tapaka ny valizy mampiasa aliminioma alimika, famolavolana lasitra, fikolokoloana fanamafisam-po mafy eo ambonin'ny tany, fanoherana avo lenta, ny kojakoja ao anatiny dia mampiasa fitaovana vy tsy misy fangarony, manalava ny androm-piainany.
Valizy ambany 45 °
Valizy ambany 90 °
Valizy ambany 180 °
Valantsara vy tanker solika antsoina koa hoe tavoahangy tavoahangy dia napetraka eo ambanin'ny tanker, ny faritra ambony dia voaisy tombo-kase ao anaty tanker. Ny famolavolana loara any ivelany dia mametra ny fiparitahan'ny vokatra rehefa potraka ny tanker, dia ho tapaka avy hatrany izy io amin'ny alàlan'ity alitara ity raha tsy misy fiantraikany amin'ny famehezana. Izy io dia hiaro amin'ny fomba mahomby ilay tanker mihodina mihoatra ny famoahana mba hiantohana ny fiarovana rehefa fitaterana. Ity vokatra ity dia mety amin'ny rano, gazoala, lasantsy sy solitany ary solika maivana hafa, sns.
1. Fitaovana: Aluminium
3. Mampifandray karazana: Square Flange
4. Mode misokatra: Pneumatika
5. Temperature: -20 ~ degre 70
Tombontsoa sy endrika mampiavaka azy
1. Karazana mahay mandanjalanja
Rehefa mikatona ny valizy dia tsy afaka manosika ny valizy ny tsindry solika.
2. Fitsaboana manokana ambonin'ny
Ny vatan'ny valizy iray manontolo dia ampandalovina dingana manokana hanatsarana ny anti-harafesina.
3. Vatana Hydrodynamika
Ny famolavolana sy ny poppet avo fiakarana dia mampihena ny fihenan'ny tsindry hanomezana taha ambony indrindra.
4. Groove any ivelany
Mankato ny fenitra takiana mba hamerana ny fandosiran'ny vokatra raha sendra lozam-pifamoivoizana.
5. Fitaovana fanokafana amin'ny tanana
Rehefa ilaina ny famoahana vonjy maika, dia tsy misy ilana azy ny fifehezana pneumatic, azo sokafana amin'ny alàlan'ny tanana izy io.
Ny haben'ny valizy dia marani-tsaina kokoa, mety amin'ny fangatahan'ny habakabaka kokoa.
Previous: 5-Wire Optic Probe sy Socket
Manaraka: Valizy miaina flange
Valve fanakatonana vonjy maika
Valizy fitaterana vonjy maika an'ny kamiao